5 Luton ခရီးသွားများသည်နေရာလေးကိုပို့ဆောင်ရေး Hack | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား >5Luton ခရီးသွားများသည်နေရာလေးကိုပို့ဆောင်ရေး Hack
မကြာခဏသူ့ရဲ့ပိုကြီးတဲ့အိမ်နီးချင်း၏ရှည်လျားသောအရိပ်အားဖြင့်ယုတ်လျော့ လန်ဒန်, Bedfordshire အတွက် Luton တစ်ဦးအလည်အပတ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်မယ့်တစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်.
ဆဌမရာစုအတွင်း Saxon အားဖြင့်ခရိုင်၏ဖမ်းယူခြင်းတွင်အောက်ပါတည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်တစ်ဦး '' ကိုထွန်း '' အဖြစ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ (စေ့စပ်ခြင်း) မြစ် Lea ၏ဘဏ်များအားဖြင့်အပင်ပေါက်သော်လည်းအရာ. အစာရှောင်ခြင်းအနည်းငယ်ရာစုနှစ်များစွာထပ်ဆင့်ပို့ရန်, နှင့် '' Lea ထွန်း '' တချို့၏တစ်ဦးအလတ်စားဈေးကွက်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည် 800 သူမြို့သား, လယ်ယာစိုက်ပျိုးနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူ.
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, ဇာတိ Lutonites နှင့်ဧည့်သည်များအလုပ်များသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုအများအပြားရှိသည် - ဟော့စပေါ့အပါအဝင် ကြိုက်တယ် စိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်များ နှင့် Stockwood Discovery စင်တာနှင့် undulating တောင်ကုန်းများ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းဆိုင်ရာအပိုငျးအ, ချိုင့်ဝှမ်း, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း အဆိုပါ Barton တောင်ကုန်းများ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး.
ထိုသို့ထပ်မံ afield လည်းန်းကျင်အရလွယ်ကူသောနေရာအရပ်များနှင့် Adventures များအတွက်တောက်ပအခြေစိုက်စခန်းဖွင့် - စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူဒါ, ဤနေရာတွင်နေရာလေးကိုငါးများမှာ တင်ဆောင် Luton ခရီးသွားများအတွက် Hack.
ဘတ်စ်ကားခရီးသွား ဒါကြောင့်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူဆောင်တတ်၏ - ကမြန်ဆန်စွာဖွင့်, အဆင်ပြေ, ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းစေနိုင်သည် ကားတစ်စီးခရီးသွား (ဒါပေမယ့်ရထားထက်ပို, ရထားခရီးသွားခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်).
ထိုအ Luton အတွက်, ဒါကြောင့်လည်းသိကြရအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ် ဒေသခံတွေ, ချက်ချင်းကိုသင်အိမ်မှာပိုပြီးခံစားရစေမည်ဖြစ်သော.
Luton ကောင်စီရဲ့ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းအချက်အလက် မြို့မှာကြိုတင်သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်ရန်ထိုက်တန်တိုင်ပင်နေသည်.
သငျသညျခဏ Luton အခြေစိုက်နေတယ်ဆိုရင်, ဝယ် တစ်ဦးဆိုင်ကယ်တစ်တောက်ပစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်.
သံသရာမှာဘုရငျမှာ 56-66 Luton အတွက် Dunstable လမ်းမကြီးစက်ဘီး၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်, လျှပ်စစ်အပါအဝင်, ကွမ်းခြံကုန်း, နှင့်တစ်ပြားမှဖိုး - သင်ကျိန်းသေသင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သင်အလွယ်တကူလန်ဒန်တူသောနေရာများကနေရထား၏နှစ်သိမ့်အတွက် Luton သွားရောက်နိုင်ပါတယ်, afield ဘာမင်ဂမ်နှင့်နောက်ထပ်, ဒါသင်၏နောက်ဘို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းငှါမမျှဆင်ခြေရှိပါတယ် မိသားစုအားလပ်ရက်.
Browse ကို အမျိုးသားရထားရဲ့ Luton ဘူတာဝဘ်စာမျက်နှာ သငျတို့သနှင့်ဆီကရတဲ့အပေါ်အချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် ဘူတာရုံ, ထိုကဲ့သို့သောအိမ်သာအဖြစ်အဆောက်အ ဦ, နှင့်မိုဘိုင်း access ကို.
တစ်ပင်ရှိတယ် နေရာလေးကိုမြေပုံ တောက်ပသော - သင့်ဝက်ဝံ get သေချာစေရန်.
သငျသညျ Luton အနီရောင်ဆေးထိုးခြင်းမှစီစဉ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ, ရေလောင်းတွင်းအကြားသင်ယူနေတဲ့တက္ကစီ booking ပညာရှိတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျ curbside တက္ကစီရွေးချယ်စရာများများတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် goluton.com မြို့ရဲ့အကြီးဆုံးအော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှငျ့သငျတို့ကငွေသားကိုကယျတငျနိုငျ အွန်လိုင်းရှေ့ဆက် booking.
တက္ကစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားကြီးမားသောအချက်မှာသတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းမလိုအပ်ပါ မင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံး တစ်ညလုံးအအေးခံနိုင်သည်.
Aberdeen အပါအဝင် - Luton လေဆိပ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများတစ်အကွာအဝေးမှလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ် Launchpad ဖြစ်ပါသည်, ဂါ, နှင့်ဇူးရစ် - ဒါကြောင့်နေရောင်, ပင်လယ်, နှင်းများသည်တောင်မှအနည်းငယ်သာခုန်သွားသည်.
သငျသညျလေဆိပ်ကိုကားမောင်းပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်, SkyParkSecure.com Luton လေဆိပ်ကားပါကင်ရှိပါတယ် ကြောင်းလုံခြုံင် တတ်နိုင်.
သင့်ရဲ့စီးနဲ့လုံလုံခြုံခြုံ stowed, သငျသညျလုံးဝအေးဆေးတည်ငြိမ် feeling ဂျက်ချွတ်နိုင်.
ငါးပါးနေရာလေးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Hack Follow နှင့်သင် Luton ၏အများဆုံးလုပ်ရပါလိမ့်မယ် - သငျနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်!
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းဖွင့်! တွစ်တာတွင်ဤ blog post ကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Luton ခရီးသွားအကြံပေးချက်များကိုမျှဝေပါ.
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးကားပါကင်ရဖို့ SkyParkSecure ကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်လန်ဒန်ဖို့အကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်တွေရဖို့, အသုံး တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml သငျတို့သဘာသာစကားများမှ / fr သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပို / zh-CN ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#လေဆိပ် #ပန်းခြံ Luton ခရီးသွားများအတွက် ရထား